CheAlzheimer: zvinokonzera, zviratidzo uye kurapwa
Vanhu vakawanda vakwegura vanotsutsumwa pamusoro pathological yokukanganwa. Kakawanda, chiratidzo ichi zvinoratidza kukura chirwere kwazvo - chirwere cheAlzheimer. In mabhuku ezvokurapa pane mamwe mazita kuti chinzvimbo ichi: dementia, dementia , kurasika pfungwa, psychosis, etc. idzi pfungwa ikashandiswa uye zvinonyatsorehwa kunotoda kurapa..
PFUPI KUTSANANGURWA chirwere
Vanhu vakawanda vanoziva kuti masero etsinga dzinoratidzwa nemano avo apore. Mashoko aya kakawanda zvakaratidza zveBhaibheri zvakawanda. Kana Tutsinga tunofambisa mashoko utwu kufa, uyu muitiro ine kunambwa muviri wose. Murume yakatanga chetsinga chirwere. Uye mumwe wavo penga nokuda kokuchembera kuoma dzimwe nhengo dzomuviri.
Muupenyu hwezuva nezuva, tinofanira anotaura zvokurwara ichi kana kutaura nezvematambudziko ndangariro. Kazhinji ndivo pasi vakwegura, asi vechiduku, zvinosuwisa, nhasi haisi kure shure kwavo. Asi kana majaya nemhandara panowanikwa chirwere inowanzopiwa kunokonzerwa mazhinji pamusoro-voltage, ipapo zvekare azere kunotangira kufa masero etsinga. Nokumhanya izvi nguva dzose nomumwe uye kunoenderana ezvinhu nhumbi.
Uyewo, ino chinoratidza muviri, mararamiro uye nhodzera. Kana midziyo havachisiri zvakanaka ishande, ropa asingadi kupinda uropi uye dzimwe nhengo oxygenated. Masero etsinga vanotanga kuona kusava muviri. Saka, muitiro wacho akatanga kuparadzwa kwavo. Yakanga panguva ino uye hwava ndangariro vanotaura mune vakwegura.
Nemhaka kukura zvokurapa, vanachiremba kungaita nechepakati tsinga vakwegura munhu ane Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri ezvinhu. Nhasi unogona kuwana vanasekuru makore 80 pasina kuchangotanga kuchiratidza penga nokuda kokuchembera kuoma dzimwe nhengo dzomuviri. Pashure pezvose, kukwegura hachisi chirwere - chinhu chagara muitiro woupenyu muviri. Asi padivi zvoutano - zviri siyana zvirwere kuti vane zvinangwa zvavo uye mishonga.
Pakati huru zvinokonzera cheAlzheimer vanachiremba vane anokudzwa:
Kutyora mukuru-mugiredhi chepfungwa kutenderera.
Update kutsanya zvakakwana pfungwa masero.
Kukanganisika nokukanganisika kwendangariro.
kuziva zvakakodzera huru zvinokonzera chirwere panguva zvokuongorora danho kunoita kusarudza inonyatsobudirira kurapwa.
The kuratidzwa yokutanga
Zviratidzo uye vabatwe cheAlzheimer vanorondedzerwa mapepa akawanda sayenzi. Zvisinei, mumwe nomumwe wavo teererai pamusoro akwegura ari munhu. Zvechokwadi, pamwe chirwere ichi kazhinji kutarisana vakwegura.
Kuti varege kutadza nguva uye nokukurumidza kutsvaka mishonga, uye hama dzepedyo vanofanira kuziva vokutanga zviratidzo cheAlzheimer. In zvachose pane zvizhinji kwavari. Akanyorwa pazasi ndivo chete rakajairika:
Zvinetso nokutaura midziyo.
The akaipa manzwisisire chaicho.
The mufananidzo zvekuchipatara kunowanzokonzerwa nechimwe chaizvo chaizvo zviratidzo. Patient maitiro anochinja zvinoshamisa, anorasikirwa kufarira basa aimbova. Ziendamberi mabasa (akadai mazino rokutsvaira, kubika) zvino zvakaoma kugadzirisa. Vamwe vava zvakare nemakaro uye kutanga kuchengeta unneeded zvinhu zviri mufurati.
Ukuwo, munhu akadaro anoita vavafadze, uye unhu hwakanaka. Anova aitaurisa, anogara achienda chikamu munhaurirano zvine. Zvisinei, nyore mibvunzo inogona kuisa mumwe standstill. Ndivo zviratidzo cheAlzheimer kuratidza kuchiita chirwere.
Zvokukura Kugadzirwa chirwere
Kukura pathologic muitiro zviri nyore kutsanangura muzvikamu zvitatu. Mumwe nomumwe wavo kunoratidzwa nedzimwe zviratidzo uye zviratidzo.
Panguva kwokutanga Danho murwere rave unopinza kuderera rezvedzidzo mano. Anopindura havaratidzi kukurovedza, asi achiri kukwanisa vakazvimirira kuzvitarisira. Iye haakonzeri zvinetso kubika, kugeza kana kuenda kuchimbuzi.
Danho rechipiri kunoratidzwa ne Kushatiswa zvinonakisa kunotoda mufananidzo. The munhu zvishoma nezvishoma anorasikirwa kukwanisa kushandisa hanya zvigadzirwa, maserura. Anogona kungoerekana kukanganwa sei kutendeukira pachitofu kana akakiya mukova mberi.
Chechitatu Danho panguva anonzi wokupedzisira. It kwakaratidzwa lunacy zvakakwana. Murwere anorasikirwa unyanzvi chepuraimari vasiri kwendangariro. Somuenzaniso, anogona kuvasunungura vakazvipfigiramo zvachose chero nzvimbo waunoda. Munhu akadaro asinganzwisisi sei zvakanaka kuchengeta midziyo, nei zvinosanganisira ndiro. Panguva iyi, murwere, uyo penga nokuda kokuchembera kuoma dzimwe nhengo dzomuviri akaonekwa, zvinoda kugara.
The zvaida ongororo yezvokurapa
Kana zviratidzo chirwere wokutanga hwobva kutsvaka rubatsiro kubva wetsinga. Kunonoka ndiko chisingadiwi, sezvo masero uropi etsinga vaparadzwa rurefu nokukurumidza. Nokukurumidza chiremba Achasarudza kurapwa, nani mukana sipidhi izvi.
Chirwere chirwere chinotanga ongororo yakaitwa murwere uye kudzidza nezvenhoroondo yacho. Pashure paizvozvo, chiremba prescribes misoro kuongororwa, zvinosanganisira zvinotevera mabasa:
kwakakwana ropa count;
MRI kana CT scan uropi;
In pamberi concomitant matambudziko vezvokurapa kungada kubvunza uye unyanzvi (somuenzaniso, imwe cardiologist).
Principles vanorumbidzwa kurapa
mushonga Universal nokuti cheAlzheimer hakuwaniki, nekuti pakupedzisira kukurira chirwere hazvibviri. Masero etsinga regai panoda.
Ko mushonga ano? Varwere chirwere ichi pakutanga iri basa zvinodhaka mishonga. Pairi ichakurukurwa zvizere pazasi. Kuti uvandudze mukuru ezvinhu dzimwe nguva kushandisa mushonga chetsika.
Kudzorerwa kungada nguva yakawanda nesimba. Naizvozvo, kuti murwere uye mhuri yake inofanira kuva nemwoyo murefu. Pfari kunyangarika pakarepo. Mune zvimwe zviitiko, zvinopesana neizvi muitiro, uye ndangariro anomutswa.
Mabatirwo cheAlzheimer anotanga kugadzwa nootropics. kushandiswa kwenguva refu kunogona kuvandudza zvavo zvishande basa, ude chepfungwa kutenderera. Mahwendefa vanofanira kupiwa chete nachiremba. Zvikasadaro, unogona kukuvadza utano, pasinei zvakanaka tolerability kwezvinodhaka kubva muboka iri vakwegura.
With kuchembera vascular rusvingo anotanga rive dete. Somugumisiro, pangozi atsamwira inowedzera. Naizvozvo chinhu chinokosha zvinodhaka mishonga iri kushandiswa kwezvinodhaka kusimbisa vascular rusvingo. Uyezve, unogona kubatsirwa uye zvinodhaka, sechikamu iyo pane zvine caffeine uye niacin. It vaiona okushamisira uye mavhitaminzi zvinobatsira chero zera.
chirwere cheAlzheimer kunowanzoguma pedyo nani hachifadzi zviratidzo. Varwere dzinotanga nechisimba uye okupanduka maitiro. Saka, chiremba wako ringavakurudzira antidepressants kusunungurwa kubva huta breakdowns. Kuunza munhu upenyu, dzimwe nguva hazvigoni kuita pasina mapiritsi. In akazotevera nzendo chirwere achitora chete mapiritsi regai raida kubatsirwa nenyanzvi mumunda wepfungwa.
The for kupora
YeAlzheimer uropi chirwere midziyo - ichi hachisi mutongo. Kana murwere hurukuro Qualitative uye nenguva kurapwa, vanogona kutarisira zvakanaka fungidziro. Kushandisa zvinodhaka uye mararamiro kuchinja zvinogona kuderedza kuchinja chirwere.
Asi zvinokosha kunzwisisa kuti murwere havazombokwanisi kuti zvakazara kudzokera ayo yapfuura mamiriro. dzimwe nguva maperembudzi anozviratidza, kunyange apo pasi chiremba audzwa.
Kuitira kudzivisa mangwanani kukura chirwere, zvakakodzera nguva kuita mukudzivirira.
Chokutanga, vanachiremba vanokurudzira kuti adzokorore nezuva kudya vachifarira zvokudya utano, kusiya tsika dzakaipa. Vachava kubatsira uye mitambo. Nhasi, ari kushandiswa dzakawanda nzvimbo vane boka physiotherapists vanoshanyira vanhu chete vakwegura. Kusandura tsika nemararamiro nguva dzose ane kubatsirawo yose muviri.
An rokuti chinokosha kudzivirirwa uye zvechigarire ndangariro kurovedza. Masayendisiti dzakaratidza kuti Somuenzaniso, nekugadzirisa Crossword Puzzles uye hunoita kuti ndichengetedze basa chepfungwa. Vanhu daily kudhanilodha uropi pfungwa Puzzles vari zvikuru kashoma kuti vanotambura kuratidzwa penga nokuda kokuchembera dementia.
Sei kubvisa toxicity? mupfungwa zvinhu
Munoziva nezvazvo, kana Sei minyato pasi meso?
DDDS - chii here? Chirwere, mifananidzo, kurapwa
Hudyu bursitis: zviratidzo, zvinokonzera uye Mabatirwo zvavo mishonga
Marshal chirwere: tsananguro, zvinokonzera, chirwere, zviratidzo uye kurapwa
Polyp ari ura: zviratidzo uye kurapwa, kuvhiyiwa kubvisa
Kushanda - ndiko kugona vabatsirwe chero mamiriro ezvinhu
Borovaya dumbu uye tsvuku bhurasho: kushandiswa akabatana zvivako
Densitometry - chii? Bone densitometry nomuzongoza: zvairatidza uye mitengo
Chii chinofanira kuva chiyero chemakumbo emwana nezera?
Mitemo, izvo inokosha kuti muchato
Alexei Seliverstov. Famous mutambi uye kodzera tsvimborume
Chikwereti Sberbank kweRussia - magwaro uye mamiriro ezvinhu kuti tigamuchire
Acid mvura - acid mvura ...: zvikonzero. The chinetso asidhi mvura
Chiratidzo "akaropafadza." zvichireva
Kutungamirira mafuta echitema kubva nguo? Means uye nzira
Haybulaev Tagir Kamaludinovich: Biography
Chalkidiki: wongororo pamusoro zororo. The yakanakisisa hôtels muna Halkidiki (nokuti wongororo evashanyi)